Waxaa loo yaqaan: Argagixisada Reer Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaa loo yaqaan: Argagixisada Reer Muqdisho
Qormadaan gaaban waxaan ku dul is taagi doonnaa Saddex shaqsi oo xag-jirnimada diimeed, midda qabyaaladda iyo heyb-naceybka gaarka ah biya dhigteen, waana aabayaasha Argagixisadda Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Madaxixii Sir-doonka Al-Shabaab, Zakariye Ismaaciil Axmed Hersi iyo aabaha qabyaaladda Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
Waa xaqiiq in shaqsiga ugu awoodda badan Dowadda Farmaajo, uu xiriir qoddo dheer la leeyaahy Al-Shabaab iyo Ururo ka waaweyn oo Argagixiso iyo sir-doon waddamo shisheeye ah, Fahad Yaasiin oo ku magacaaban Agaasimaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya, waa hor joogaha Siyaasiyiinta Shabaabka ah ee ku jira Dowladda Fadaraalka.
Fahad, wuxuu isku dibba-radaa, aruuriyaa oo uu hoggaan u yahay Siyaasiyiinta Shabaabeysan, Saraakiisha soo diga-rogta iyo qabyaaladeys-tayaasha cuqdadeysann ee qurunkii uu u meeriyaba qaadan kara, waa shakhsi xiriir xooggan la leh mukhaabaraad dalka Qatar oo naas-nuujiya Argagixisada adduunka, waana nin qofka ay kala argtida duwan yihiin cadow u ah.
Fahad, wuxuu ahaa shaqsiga ugu awoodda badan afartii sano ee la soo dhaafay dalka, wuxuuna ka tallaabsay meydka Soomaali badan,wuxuu qeyb weyn ku leeyahay weeraradii Madaxdii hore lagu qaaday, waxaana xaafiiskiisa ku dhamaaday kiisas waaweyn oo la xariira weeraro ay Al-Shabaab ka geysteen Caaismadda Soomaaliya.
Wuxuu dhidibada u taagay koox isku xiran oo ah Argagaxiso xasaanad leh oo Muqdisho ka howl-gasha, wuxuu magaalada Muqdisho soo galiyay Al-Shabaabkii ugu badnaa, sida uu caddeeyay Taliye ku xigeynkii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla, kaas oo shaqada laga raacdeeyay markii uu sheegay inuu bannaanka keenayo caddeeymo la xariira calaaqaadka ka dhexeeya Fahad iyo hoggaanka Al-Shabaab.
Fahad Yaasiin, wuxuu howl-galiyay Saraakiishii Al-Shabaab ee hore ugu soo wareegay dhanka Dowladda, wuxuuna xil muhiim ah u dhiibay mid ka mid ah Todobadii hoggaamiye ee ugu sarreeyay Al-Shabaab ee uu bartilmaameedsaday maamulkii Obama sanadkii 2012-kii, kaas oo madaxiiisa la dul dhigay 3 melyan oo doolar, waa Zakariye Ismaaciil Axmed Hersi, oo hor jooge u ahaa Amniyaadka Argagixisada Shabaab.
Zakariye Ismaaciil, wuxaa loo adeegsaday fulinta qorshaha qaarijinta dadka reer Muqdisho, wuxuuna maleegay dhowr weerar oo lagu qaaday Huteellada Caasimadda, wuxuu fududeeyay qaraxyo waaweyn, waxaana ugu danbeyn xaafiiska galay kiiska Qarixii July 24, 2019, ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir, kaas oo uu ku geeriyooday AUN, Guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ‘Yariisow’.
Zakariye Ismaaciil, hadda waa baxsad, wuxuuna ka mid noqday shaqsiyaad caasimadda ka caraaray markii ay inta badan maamulka Magaalada Muqdisho la wareegeen ciidamadii Badbaadada Qaranka ee ka hor yimid muddo kordhintii loo sameeyay Farmaajo, wuxuuna hadda ku dhuumaaleysanayaa dalka Turkiga.
Waxaa jira nin labadaan nin ka duwan, oo muddo dheer sheegta waddaniyad been ah, qalbigase ka buka oo qabyaalad qurmoon uga buuxdo, waa Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, oo muddo dheer ka tirsanaaa Baarlamaanka Soomaaliya.
Zakariye Xaaji Cabdi, wuxaa aad loo bartay xilligii Itoobiya ku soo duushay dalka, wuxuna noqday ku xigeenka Guddoomiyaha Fulinta Isbahaysigii Dib U Xoreynta Soomaaliya, kadib markii uu ka shaqeeyay inuu Isbaheysigu kala jabo, waxaa laga saaray Ururka, wuxuuna ka mid noqday kooxdii Al-qaacidda, garabka ka heleysay ee ku hartay magaalada Casmara ee dalka Eritrea, si loo cuuryaamiyo Dowlad loo dhanyahay oo Muqdisho ka dhalata.
Zakariye Xaaji, oo meel kasta iyo meherad walba la taagnaa jiray waxa uu ugu yeero “Nacaybka Itoobiya” laakiin guuxa shacabku ku suntay “Jaceylka Amxaarada ee Zakariye” ayaa meel uu jaan iyo cirib dhigay la waayay markii uu Farmaajo, muwaadiniin Soomaaliyeed u dhiibay Amaaxada, Ururo gobonimo doon ahna ku daray liiska Argagixisada.
Zakariye Xaaji, waxaa loo adeegsasay durbaan gacaara qabyaaladda, wuxuuna Gobollada Sool, Sanaad iyo Mudug, ka soo aruuriyay Maleeshiyo beeleed la hugiyay magaca qaranka, kuwaas ka shaqeeya kaliya filinta danaha kooxda isku xiran ee Argagixsada Muqdisho.
Saddexdaan Nin iyo Horjoogahooda Formaajo, waxaay hoggaan u yihiin Koox isku DUBARIDAN oo u tafaxaydatay Cadaadinta, Caburinta argagixinta Guudahaan Soomaaliya Gaarahaan Bulshadda Reer Muqdisho.